कन्चन र अनिसाको प्रेमको अन्त्य कसरी भयो ? कन्चन र अनिसाको घरमै पुगेर हेर्दा यस्तो देखियो - Microlink Media::News Media Website
कन्चन र अनिसाको प्रेमको अन्त्य कसरी भयो ? कन्चन र अनिसाको घरमै पुगेर हेर्दा यस्तो देखियो
चितवनका कन्चन तिमिल्सना एक राम्रा व्यक्ति थिए। उनि घरका कान्छो छोरा हुन। बुबाले अर्को बिबाह गरे पछि आमाले बल्लतल्ल पालेकि थिइन्। धेरै दुख गरेर हुर्केकी आमाले अब छोरा ठुलो भयो छोराले केहि गर्ला अब भन्ने आश आमा बसेकी थिइन्। कन्चन अनिशाको मायामा पर्छन ,त्यसपछि बिबाह गर्ने निर्णयले उनि हासी खुसि बिबाह गर्छन। बिबाह गरे पछि अनिशाको आमा बुबाले हामी तपाईहरुलाई स्वीकार गर्छौ आउनुहोस भने पछि उनीहरु ससुराल जान्छन। ससुराल गएको दिन माइतीले कन्चनलाई कुटपिट गरेको कन्चनकि भाउजु मिडियामा आएकी छिन। कन्चनलाई ससुरालीले प्रहरी चौकीमा लगे पछि अनिसा को हो तेरो भनेर सोध्दा मेरो श्रीमती हो भनेका थिए भने अनिशाले कन्चन हो मात्र भनेकी थिइन्।
अन्ततः रहेनन् कन्चन आज यो संसार छोडेर बिदा भए सबै नेपालीलाई रुवाउँदै। दुखको यस घडीमा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछौ l साथै शोक सन्तप्त परिवारमा धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त होस् भन्दै हार्दिक समबेदना व्यक्त गर्दछौं ।
चितवनका कन्चन तिमल्सिना र अनिशा कुमालको प्रेम प्रसंगले केही समय अघि निक्कै चर्चा बटुलेको थियो। कारण उनीहरुले काठमाडौँमा गएर विवाह गरेपछि अनिशा आफ्नै घर फर्किएपछी कन्चनले वि,ष पिएर आ’त्मह’,त्या गर्ने प्रयास गरेका थिए ।विवाह गरेर पुन: घर फर्किएकी अनिशा यस विषयमा स्पष्ट पार्न मिडियामा समेत आएकी थिइन । अनिशाका अनुसार उनीहरुको चिनजान फेसबुक मार्फत भएको थियो । विस्तारै उनीहरुको फेसबुक मै मायाको कुरा भएको स्विकारिन । तर अनिशाले विवाह नै गर्ने भनेर स्वीकार नगरेको बताएकी थिइन । कन्चनले काठमाडौँ लगेर जवर्ज*स्ती सिन्दुर लगाईदिएको समेत उनले बताएकि थिइन ।अनिशाको परिवारले छुट्टाईदिने भन्दै कन्चनले जबर्ज*स्ति सिन्दुर लगाई दिएको बताएकी थिइन। कन्चनले ज,वर्जस्ती सिन्दुर लगाएको फोटो खिचे पछि मात्र घर पुर्याईदिने भने पछी आफुले त्यसो गरेको अनिशाले बताइएकि थिइन ।